Calendar 2014 “Town” Kwikhalenda - Imagazini yoyilo
Kwikhalenda Idolophu yiteyiphu enamaphepha enezinto ezinokudityaniswa ngokukhululekileyo kwikhalenda. Hlanganisa izakhiwo ngeendlela ezahlukileyo kwaye ukonwabele ukudala eyakho idolophu incinci. Uyilo olusemgangathweni lunamandla okutshintsha indawo nokuguqula iingqondo zabasebenzisi bayo. Banikezela ukuthuthuzela ukubona, ukubamba nokusebenzisa. Zixutywe kukukhanya kunye nenqaku lokumangaliswa, ukucebisa indawo. Iimveliso zethu zoqobo zenziwe kusetyenziswa umbono woBomi ngoYilo.
Igama leprojekthi : Calendar 2014 “Town”, Igama labayili : Katsumi Tamura, Igama lomthengi : good morning inc..
Kwikhalenda Katsumi Tamura Calendar 2014 “Town”